Virus hita in Sardinia anjara toerana tsara tarehy 3 FSX
fanontaniana Virus hita in Sardinia anjara toerana tsara tarehy 3 FSX
1 taona 11 volana lasa izay #460 by bacco
Vao avy nahazo ny exe niala ny AVG. Toa fa ny otrik'aretina na zavatra toy izany dia ao anatin'ny installer.
Mba andefaso olona ny mpanoratra ary angamba tsy raikitra fanampiny mandra-Downloads
1 taona 11 volana lasa izay #461 by Growler37
Tsy misy tokony hampanahy, dia afaka antoka fa izany fotsiny sandoka mamantatra tsara ny anti-otrik'aretina rindrambaiko. Ny Avast anti-otrik'aretina, dia manao mitovy tanteraka izy. Noho ny antony dia tsy faly ny skanera amin'ny .exe rakitra installer izay voalaza ao amin'ny fampirimana ny toerana manodidina. Nahamarika izany aho tena matetika mitranga amin'ny Avast satria nohavaozina ny rindrambaiko roa volana lasa izay. Ny rindrambaiko ankehitriny saro-pady loatra, miaraka amin'ny antontan-taratasy maro izay tsy mampidi-doza tanteraka! Miahiahy aho olana mitovy olana amin'ny AVG.
Manantena ihany fa nanome toky anao. Fotsiny ianao mila mankarary ny AVG scanning velona ho an'ny 10 minitra eo ho, mba faly hamita ny fametrahana. Ny tena tsara toerana manodidina Sardaigne, IMHO very maina manampy ny sim. Mirary ny soa indrindra.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: rikoooo, slvooor
Fotoana mamorona pejy: 0.661 segondra